Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe ịchọ mma Korea Vella na-agbasawanye na Japan ugbu a
Vella mepere ụlọ ahịa gọọmentị ya na nnukwu ụlọ ahịa e-azụmahịa Japan 'Qoo10' wee kwuputa na ọ ga-ere ngwaahịa na-atọ ụtọ, dị ọcha yana ngwaahịa flagship ya bụ ngwaahịa vegan gụnyere Vella Ultra Hydro Sun Essence.
Vella bụ akara nlekọta anụ ahụ mbụ na Korea iji wepụta ahịrị ngwaahịa nlekọta olu wee ree ihe karịrị nde 1, guzobe ọnọdụ ya na Korea.
Site na mmeghe gọọmentị a, ndị ahịa Japan nwekwara ike zụta Vella Ultra Hydro Sun Essence na Qoo10. Vella Ultra Hydro Sun Essence bụ No. 1 kacha mkpa anyanwụ na ngwaahịa nlekọta anyanwụ nke enwere ike iji n'afọ niile na Wadiz.
Na-eme mmemme mmeghe nke ụlọ ahịa gọọmentị, Vella na-enye mbelata 20 pasent ruo Nọvemba 26 site na nnukwu mmemme mbelata na Qoo10.
Ka ọ dị ugbu a, Vella gbasaara n'ahịa ndị Japan na-amalite site na ikpo okwu ịzụ ahịa n'ịntanetị nke Japan nke Qoo10, na-agbasawanye iru ya zuru ụwa ọnụ site na ịbanye n'ime nyiwe e-azụmahịa nke mpaghara ọ bụla dị ka Shopee, nnukwu ikpo okwu azụmaahịa n'ịntanetị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na Amazon. ụlọ ọrụ e-azụmahịa kacha ibu n'ụwa.